Inguqulelo yokupakisha enobukrelekrele kwiimveliso zonyango kunye nezempilo | Toptag
Alithandabuzeki elokuba i-coronavirus iye yaba yingxaki yehlabathi. Ukuthintela ukosuleleka, abantu baye bayiqonda ngakumbi impilo yabantu, ekhokelele ekunyukeni okukhulu kwimfuno yeemveliso zempilo kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo. Ngenxa yokunqongophala konikezelo, iimveliso zomgunyathi kunye nexabiso eliphantsi zisasazeka ngokukhawuleza kwimarike, eyenza ukuba abantu baqale ukuqonda ukhuseleko lweemveliso zococeko.
Abathengi kufuneka bazi le mveliso ilandelayo ngaphambi kokuthenga:
1) Ivela phi? (ilizwe lemveli)
2) Yenziwe nini? (Sebenzisa ixesha / ubomi beshelfini)
3) Yiyiphi imisebenzi? (UMgangatho weMveliso)
4) Ngaba ikhuselekile? (Imveliso engeyiyo yomgunyathi)
Ngokubanzi, kungathatha ixesha elide ukuqinisekisa olu lwazi, kwaye itekhnoloji yeRFID ibonelela ngesisombululo esifanelekileyo sokusombulula ezi ngxaki.
Amanqaku angasebenzisa i-RFID ukurekhoda lonke ikhonkco lexabiso leemveliso ukusuka kwimveliso ukuya kwintengiso. Ngapha koko, iRFID kunzima ukuba yenziwe ngomgunyathi. Abasebenzisi banokusebenzisa ii-smartphones zabo ukufumanisa ulwazi ngemveliso kunye neenkqubo. Xa kuthelekiswa nezinye iitekhnoloji ezinje ngeekhowudi zeQR kunye noshicilelo oluchasayo, iRFID ibonelela ngenqanaba eliphezulu lokhuseleko, kwaye inkqubo yokuqinisekisa ilula kwaye ithe ngqo. Lilonke, iRFID iqinisekisa ukhuseleko lweemveliso kunye nedatha.
Abantu banokuzibuza iindleko zokutyala imali kwiRFID. Kwimveliso enexabiso eliphantsi, ukongeza iisenti ezimbalwa kwiindleko kunokuba yingxaki enkulu. Kodwa enyanisweni, itekhnoloji yeRFID isetyenziswa ngokubanzi kwishishini lokuthengisa, kwaye zininzi iimeko kunye nezifundo ezibonise ixabiso lesicelo seRFID, ngakumbi kwimveliso yeempahla zabathengi ezihamba ngokukhawuleza. Ngokucacileyo, izibonelelo ezifunyenwe kwityathanga lexabiso emva kokufumana i-RFID (ukhuseleko lwemveliso, ukubonakala kwempahla, ulawulo lwempahla, kunye namava abathengi) zigqithile kwiindleko, kwaye itekhnoloji yeRFID ngokuqinisekileyo iya kuba yitekhnoloji yokuhamba kwimarike yemveliso yezonyango / yezempilo.
Khumbula, ukhuseleko kunye nempilo zixabiso.
Ukuqala ngo-Matshi 2020, uCinda IOT uye wasebenzisana neZeroTech IOT ukubonelela ngeRFID yokupakisha ngobuchule kunye nezisombululo zokulandelela iimaski zonyango.
Kule projekthi, umenzi wethegi yeRFID uCinda IoT uyile uthotho lweeRFID zokupakisha ezifanelekileyo kwiimaski zonyango, ezinokuthi zisetyenziswe kwinkqubo yokupakisha ngabavelisi bemaski yonyango. Okubaluleke ngakumbi, uyilo lokupakisha lubuthathaka kwaye luya kutshatyalaliswa lakuba luvuliwe.
"Xa siyila iipakethe ezifanelekileyo, sichitha ixesha elininzi sigxila kukhuseleko lwemveliso."
Utshilo uMnu Huang, umphathi jikelele weCinda IOT Marketing Centre. Ngokweemfuno zeshishini, abavelisi beemaski banokukhetha ukusebenzisa ukupakisha okuhle kwimaski nganye yonyango okanye kwibhokisi nganye. Nje ukuba iimveliso zeemaski zincanyathiselwe kwiithegi zeRFID, yonke imisebenzi yeshishini kubandakanya ukupakisha, ukuhambisa, ukungena kwempahla kunye nokuphuma kwindawo yentengiso, kunye nokuziphatha kwabathengi kunokulandelelwa kwaye kurekhodwe kusetyenziswa izixhobo zeRFID kunye neenkqubo.
"Ndonwabile kakhulu ukusebenzisa iqonga lethu lokulandela umkhondo weRFID kwaye iDragSpace iyayixhasa le projekthi."
U-Henry Lau, u-CEO we-ZeroTech, uthe: "Iqonga lethu lamafu ngoku lisetyenziswa ziimpawu ezaziwayo kwishishini lokuthengisa ukulawula idatha yeempahla. Uzinzo nesantya seqonga siqinisekisiwe. ”
"Ngokwembono yobuchwephesha, akukho mahluko phakathi kokulandela umkhondo wezonyango kunye nokulandela impahla, kodwa eyokuqala inentsingiselo, ngakumbi kule meko sikuyo ngoku."
Ngeqonga lefu le-DragonSpace, abathengi bafuna kuphela ukuskena ukupakishwa okufanelekileyo kweemaski zonyango kunye nee-smartphones zabo, kunye nembali efanelekileyo kunye nolwazi ngemveliso ziya kuboniswa. Nokuba kungaliphi na ixesha okanye indawo, abathengi ngoku banokuchonga ukuba ngaba ikhava yokuphuma iyimveliso yomgunyathi ngaphakathi komzuzwana.